मनछुने भनाईहरु – राम्रो राम्रो कुरा त किताब र भित्ताहरुमा पनि लेखिएको हुन्छ
रोचक मनछुने भनाईहरु – राम्रो राम्रो कुरा त किताब र भित्ताहरुमा पनि लेखिएको हुन्छ
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: मन छुने भन्नुको अर्थ के हो ? पक्कै पनि मन छुने भन्नुको अर्थ यस्ता कुराहरु जसले हाम्रो भावना बुझेको प्रतित हुन्छ । यहाँ त्यस्तै १० भनाइहरु राखिएको छ जसले हाम्रो भावना बुझ्छ । हाम्रो आदर्शका कुराहरु गर्छन् र हामीलाई केहि ज्ञान दिन्छन् । तपाईलाई यी १० मन छुने भनाईहरु पढ्दा कस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला । मन परेमा तपाईले यसलाई सेयर गर्न पनि सक्नु हुन्छ । हामी सकारात्मक सोचमा यस्तै मन छुने तथा जीवन बदल्ने कुराहरु लेखिरहेका हुन्छौँ ।
१. राम्रो ब्यबहारको मुल्य सायद पैसामा नहोला तर एउटा राम्रो ब्यबहारले करोडौ मान्छेहरुको मन किने सामर्थ राख्छ ।
२. जो मान्छेले आफ्नो बानीलाई सुधार्न सक्छ उसले आफ्नो भोलीको दिनलाई पनि बदल्न सक्छ तर जसले आफ्नो बानीलाई सुधार्न सक्दैन उसको भोलीको दिन पनि त्यस्तै हुनेछ, जस्तो आज छ ।
३. मन र मस्तिष्कको लडाईमा सधै मनलाई नै जित्न दिनुस किनकि मस्तिष्कले त जितेर पनि अक्सर कन्फ्युज हुने गर्छ |
४. ठुलो भन्दा ठुलो सफलता पनि एकपल मै धरासाई हुनसक्छ यदि त्यो सफलता कसैलाई नीचा देखाउन पाइएको हो भने ।
५. भनिन्छ तिती औषधि चपाउनु हैन सिधै निल्नु पर्छ ताकी मुख तिती नहोस, त्यसैगरी जिन्दगीमा पनि अपमान, असफलता, धोका जस्तो अनेक तितो कुरा हरु आउँ सक्छन, त्यतिबेला पनि ति कुराहरुलाई सिधै निलेर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
६. एउटा असल मान्छे उसको बोली बाटनै चिनिने गर्छ किनकि राम्रो राम्रो कुरा त किताब र भित्ताहरुमा पनि लेखिएको हुन्छ ।
७. दुनियामा हरेक मान्छेलाई आग्नो ज्ञान माथी घमण्ड हुन्छ तर घमण्ड माथीको ज्ञान भने धेरै कम मान्छेलाई हुन्छ त्यसैले ज्ञानको खोजी हें. पहिला आफु भित्रको घमण्डलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुस ।
८. जिन्दगी दुई दिनको हो एकदिन तपाईको पक्षमा र अर्को दिन तपाईको बिपक्षमा हुन्छ, त्यसैले जुनदिन तपाईको पक्षमा हुन्छ त्यो दिन घमण्ड नगर्नु र जुनदिन तपाईको बिपक्षमा हुन्छ त्यो दिन हतास नहुनु ।
९. आफ्नो सफलता माथी यति घमण्ड पनि गर्नु हुदैन कि त्यो तपाइँ माथीनै भारी परोस किनकि अक्सर ढुंगा पानीमा आफ्नै भारको कारणले डुब्ने गर्छ ।
१०. यो सत्यलाई सधै याद राख्नुस कि मान्छे बाहिरको चुनौतीले कहिले पनि हार्दैन किनकि मान्छे हार्छ त् आफु भित्रको कमजोरीले गर्दा, त्यसैले आफ्नो कमजोरीलाई मेटाउन कोसिस गर्नुस तब मात्र जित तपाईको हुनेछ ।
आफ्नो दुखलाई स्वीकार गर्नुहोस् । त्यो सम्बन्ध अब सकीइ सकेको छ । त्यसैले अब यस्तो सोच्नुहोस्, जस्तो तपाईं कसैको मृत्यु हुँदा सोच्नुहुन्छ । तपाइँ आफ्नो नोक्सानलाइ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तर भावानामा अत्याधिक नडुबिकन अनि त्यसैमा नहाराइकन आफ्नो पीडाका लहरहरुमा भिज्ने कोशिस गर्नुहोस् । पिडा पनि ठिक हुनुको हिस्सा हो, भनेर बुझनुहोस् ।
चाहे तपाइँको पिडा कसैले बुझ्न नसकुन तरपनि तपाइँ आफ्नो पिडालाइ स्वीकार गर्नुहोस् । जब तपाइँ निराश महसुस गर्नुहुन्छ तब एकपल लिनुहोस् अनि मनमनै भन्नुहोस् “आज म दुखि छु, तर केहि छैन, हालत ठिक हुनेछ ।” अरु संग आफ्ना पीडाहरु बाड्नुहोस् । चाहे तपाइँ ओरिपरिका मान्छेले तपाइँको भावानाको गहिराइ नबुझुन्, तर पनि तपाइँ आफ्ना केहि मान्छेहरु संग आफ्नो पिडा सुनाउन नहीचकिचाउनु होस् ।
यदि तपाइँ जरुरत महसुस गर्नु हुन्छ भने प्रोफेसनल मान्छेहरुको मद्दत पनि लिन सक्नुहुन्छ । यदि तपाइँलाइ लाग्छ कि, “तपाइँका लागि यी पीडाहरु असैह्य छन् अनि तपाइँ आपत्तिजनक ब्यबहार गर्न थाल्नु भएको छ” भने तपाइँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ । मानसिक चिकित्सक संगको कुराकानीले आफ्नो दुखलाई कसरि सम्हाल्न सकिन्छ भनेर सिक्न सकिन्छ ।
पिडामुक्त हुनको लागि हतार नगर्नुहोस् । पुरानो भनाइ छ कि, समयले सबै घाउ ठिक पार्छ । हुनपनि भावनाको सामाना गर्दै समयलाई घाउ पुर्ने समय दिनाले बिस्तारै पीडाहरु भरिन थाल्छन् । हामि जव पीडाबाट चाडै निस्कनका लागि हतार गर्न थाल्छौँ तब झनै तनाब अनि पिडा लम्बिएर जान्छ । त्यसैले आफ्नो पीडालाई स्वीकार गर्नुहोस् अनि हतार नगर्नुहोस् ।
एकपटकमा मात्र एकदिन सोचेर चल्नुहोस् । समयको पहाडलाई तोड्नुहोस् अनि त्यसलाई टुक्राहरुमा बाँड्नुहोस् । यसरि समयलाई बाँड्दा तपाइंको पिडा पनि बाडिन्छ केहि हद सम्म । साना उपलब्धिहरुमा खुशी हुनुहोस् । तब पनि तपाइँ पिडा महसुस त गर्नुहुन्छ तर बिस्तारै तपाइँ पिडा केहि कम भएको पाउनुहुनेछ । आँफुलाई सकारात्मक कुरा सोच्न प्रेरित गर्नुहोस् । जब तपाइँमा नकारात्मक भावना आउछ तब आफ्नो बिचारलाइ कुनै सकारात्मक अनि फाइदाजनक कुरा तिर मोड्नुहोस् ।
उचित तरिकाले आफ्नो सम्बन्धको मुल्यांकन गर्नुहोस् । छुटी सकेको मान्छेलाई अति धेरै सम्मान नदिनुहोस् । यसो गरेर तपाइँ अगाडी बढ्न सक्नुहुन्न । सम्झनुहोस् कि, ऊ तपाईंको लागि उपयुक्त थिएन, यदि हुन्थ्यो भने तपाइँहरु यसरि छुट्नु पर्ने थिएन । सम्बन्धका कमजोरीहरु पनि याद गर्नुहोस् । यसलाई तपाइँलाइ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ ।
प्रेम एक मिठो अनुभूति हो। प्रेमको बर्षातमा हरकोही एकपटक भिज्न चाहन्छ। हुनत प्रेम मात्र दुइ अक्षरको छ तर जब कोहि यो प्रेममा डुब्छ तब मात्र उसलाई महसुस हुन्छ कि प्रेम कति बिसाल छ भनेर। प्रेमको मतलब दुइ मुटुहरुको मिलन हुन्छ, दुइ आत्माहरुको मिलन हुन्छ। यदि तपाईं पनि कसैलाई गर्नुहुन्छ र उसलाई पनि तपाइंको प्रेमको महसुस गराउन चाहनुहुन्छ भने पढ्नुहोस तलका केहि टिप्सहरु। जसले जुनसुकै केटि मान्छेको मन जित्न मदत गर्नेछन।
केटीले उनको सुन्दरताको तारिफ सुन्न मनपराउँछन्, त्यसैले खुलेर उनको प्रशंसा गर्नुहोस् तर उनलाई सुरुमै सेक्सी वा हट नभन्नुस। आफ्नो जीवन साथीले आफुलाई “तिमि सुन्दर छौ” भनेको खुब मन पराउछन केटि मान्छेहरु। यस्तो सुन्दा उनीहरुको मन खुशीले गदगद हुनेगर्छ। हुन पनि त केटि मान्छेहरु आफ्नो प्यारो मान्छेको लागि राम्री देखिन कै लागि कति मेहनत पनि गर्छन।
उसलाई आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग भेटाउनुहोस, ताकि उसको मनमा तपाइँ प्रति विश्वास बढ्नेछ र उसले तपाईंको मित्रतालाई स्वीकारेर तपाइँलाइ आफ्नो दिलमा खास स्थान दिनेछिन। आफ्नो घर परिवार वा साथीहरु संग उनलाई बेलाबेला भेट गराउदै गर्नाले उनले तपाइंको बारेमा अझ राम्रो संग जान्ने मौका पाउछिन् अनि तपाईं उनलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति पनि गर्छिन्। यसो गर्नाले तपाईंको प्रेम सम्बन्ध सुन्दर भएर जान्छ।
यदि उनि कुनै समस्यामा छिन भने उनि बिनम्र भएर या अँगालो हालेर उसलाई यो महसुस गराउनुहोस् कि ऊ तपाइंको जिन्दगीमा कति खास छिन् अनि उनि दुखि हुँदा तपाइँलाइ कति पिडा हुन्छ। र भन्नुस उसको हरेक समस्यामा तपाइंको साथ् रहनेछ। जव आफ्नो प्रिय मान्छेले आफ्नो दुखमा साथ दिने प्रतिवद्दता गर्छ तब हरेक मान्छेलाई आनन्द महसुस हुन्छ। स्वाभाविक रुपले उनि पनि उनि पनि तपाइंलाई अझै बढी प्रेम अनि आदर गर्न थाल्नेछिन।
जब मौका मिल्छ तब उनको कपाललाइ प्रेमले चलाउनुहोस। यसले उनको हृदयलाई खुशी पार्छ। मायाले आफ्नो प्रेमिकाको केश चलाउदा उनलाई तपाइंले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने महशुस हुन्छ। कहिलेकाहिँ मौका मिल्दा उनलाई आफ्नो काखमा लिनुहोस् अनि उनको केश संग खेल्नुहोस। केटि मान्छे हरु उपहार या सरप्राइज मन पराउछन। त्यसैले जब उनी संग भेट्नु हुन्छ तब उनको लागि केहि उपहार लिएर जानुहोस। उनलाई सरप्राइज दिन कहीं घुमाउन लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ। उपहार महँगो नै हुनपर्छ भन्ने हुदैन। अलिकति चकलेट, फुल, टेडी बियर आदि दिएर उसलाई खुशी बनाउन सक्नुहुन्छ।
यदि मौसम रमाईलो छ भने, उनलाई तुरुन्त बाहिर घुम्न लिएर जानुहोस। उनि सँग समय बिताउनुहोस्। मायालु वातावरण सिर्जना गर्नुहोस। उनका हातहरू समात्नुहोस् र बस्नुहोस्। उनको आँखामा आफ्ना आँखा जुधाएर कुरा गर्नुहोस्। केहि उनका कुरा सुन्नुहोस अनि केहि आफ्ना प्रेमिल बात बताउनुहोस। बिस्तारै उनका हातमा चुम्बन गर्नुहोस अनि उनका हातलाई आफ्नो काखमा राख्नुहोस।
जब उनि तपाइँ बाट टाढा हुन्छिन तब उनलाई म्यासेज गरेर तपाइँ उसलाई कति याद गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। सानासाना कुरामा उसलाई आफ्नो प्रेमको महसुस गराउनुहोस्। भौतिक दुरीले मनको दुरी बढ्न दिन हुदैन। यदि उनि टाढा हुदा पनि तपाईं उसलाई सम्झी रहनु भयो भने उसलाई बिश्वास हुनेछा कि तपाईं उसलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर।
ऊ संग रमाइलो गरि रहनुहोस। जस्तै उसलाई जिस्काउने, काउकुती लगाउने, उनको केशलाइ चलाउने, उनको हात पकड्ने आदि क्रियाकलाप गरेर उनि संग नजिक रहनुहोस। यसरि एकापसमा हांसी मजाक गर्ने अनि रमाइलो गरिरहने पार्टनर केटीहरुले धेरै मन पराउछन्। तपाइँ सधैँ उसलाई आफ्नो प्रेमको एहसास गराउनुहोस् अनि भन्नुहोस् कि, तपाईं उसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर। माया गर्नु मात्र हैन देखाउन पनि जरुरि हुन्छ, त्यसैले उसलाई बेलाबेला यस्तो भन्दै गर्नुहोस्।यो सब गर्दै गर्दा यो ध्यानमा राख्नुहोस कि तपाईंको व्यवहारले उसलाई दिक्क नलागोस्। उनलाई तपाइंको व्यवहारले प्रेमको अनुभूति भएको होस्।